अष्ट्रेलियाले भारतसँग हार्नुका चार कारण | Hamro Khelkud
एजेन्सी – अष्ट्रेलिया भारतसँग तेस्रो ओडिआई खेलमा १३ रनले पराजित हुन पुगेको छ । मानुका ओभल क्यानबेरामा सम्पन्न तेस्रो खेलमा भारतले जित निकाल्दै क्लिनस्विप हुनबाट बच्यो ।
टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको भारतले निर्धारित ५० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै ३ सय २ रन बनाएको थियो । जवाफी ब्याटिङ थालेको अष्ट्रेलिया ४९.३ ओभरमा अल आउट हुँदै २ सय ८९ रनमा समेटियो । अन्तिम खेलको जितले भारतलाई टि२० सिरिजमा फाइदा पुग्ने छ । अष्ट्रेलियालाई आफ्नो कमजोरी सुधार गर्ने अवसर रहने छ । अष्ट्रेलिया पहिलो खेलमा ६६ रन र दोस्रोमा ५१ रनले विजयी भएको थियो । अष्ट्रेलियाले तेस्रो खेलमा भारतसँग हुनुका चार कारण यस प्रकार छन् ।
४. वार्नरको अभाव
३. केरी हतारमा रन आउट
केरी पिचको मध्यभागमा आएर पुन: स्ट्राइकमा फर्किने क्रममा विकेटकिपर लोकेश राहुलबाट रन आउट हुन पुगे । केरी रन आउट हुनुअघि २१०–५ को राम्रो अवस्थामा हुँदा हतार गर्न कुनै आवश्यक देखिदैन थियो । केरीले मैदानमा धैर्यता देखाउदै एक रन लिन नखोजेको भए रन आउटको शिकार हुनुपर्ने थिएन । जसले गर्दा नतिजा सहजै अष्ट्रेलियाको पक्षमा जान सक्थ्यो ।
२. म्याक्सवेल फिनिसिङमा असफल
भारतको जितको टर्निङ प्वाइन्ट म्याक्सवेलको विकेट थियो । अष्ट्रेलियालाई अन्तिम ६ ओभरमा जितको लागि ३९ रन आवश्यक थियो । म्याक्सवेल आक्रामक रुपमा ३६ बलमा ५८ रनमा खेलि रहेको हुँदा अष्ट्रेलियाले सहजै जित दिलाउने अनुमान गरिएको थियो । तर ४५ औं ओभरको तेस्रो बलमा जस्प्रित बुमराहले ठूलो सट खेल्न खोजेका म्याक्सवेल योर्करमा ५९ रनमा बोल्ड आउट भएपछि अष्ट्रेलियाको जितको आशा टाढिएको थियो ।
म्याक्सवेलपछि टोलीमा ठूला सट प्रहार गर्न सक्ने कुनै खेलाडी थिएनन् । त्यसैले म्याक्सवेल फिनिसिङ गरेर फर्किनु पर्ने थियो । तर बुमराहको बलमा बोल्ड आउट हुन पुगे । जुन आउट मात्र थिएन । जितको सम्भावना पनि टाढिएको थियो । म्याक्सवेलले उत्कृष्ट ब्याटिङलाई जिम्मेवारीका साथ थप निरन्तरता दिएको भए सहजै जित निकाल्न सक्थ्यो ।
१. हार्दिक र जडेजाको साझेदारी तोड्न नसक्नु
भारत एक समय २ सय ७० को आसपासमा समेटिने अवस्थामा पुगेको थियो । ३२ ओभरको अन्तिम बलमा कप्तान विराट कोहली ६३ रनमा आउट हुँदा भारत १५२–५ को कमजोर अवस्थामा थियो । भारतको अन्तिम आशा हार्दिक पान्ड्या र रविन्द्र जडेजा थिए । यी दुई अलराउन्डरलाई चाँडै आउट गर्न सकेको खण्डमा भारतलाई २ सय ५० को योगफलमा पुग्न पनि कठिन देखिन्थ्यो ।
छैटौं विकेटका लागि हार्दिक र जडेजाले १ सय ८ बल अर्थात १८ ओभरमा १ सय ५० रनको उत्कृष्ट साझेदारी गर्दै ३ सय रन माथिको योगफल कटाएका थिए । हार्दिक ९२ रनमा अविजित रहँदै प्लेयर अफ द म्याच चुनिए । जडेजा ६६ रनमा अविजित रहे । यी दुई अलराउन्डरलाई समयमै आउट गर्न सकेको भए त्यपछि ब्याटिङको लागि मैदानमा आउने सबै प्रमुख बलर थिए । जसको कारण भारत सस्तैमा समेटिने थियो । नतिजा पनि अष्ट्रेलिया पक्षमा आउन सक्थ्यो ।